Riding on three wonderful centuries and brilliant bowling, Bangladesh beat Zimbabwe by 220 runs in the one-off Test in Harare on Sunday. Mahmudullah won the man of the match award for his unbeaten 15...
Bangladesh allrounder and T20 captain Mahmudullah Riyad was presented a guard of honour by his team mates as he bade an emotional farewell to Test cricket ahead of the fifth day’s play in the Harare...
Bangladesh need seven more wickets to register a win in Harare Test against Zimbabwe. Aiming to score 477 runs to win the game, Zimbabwe ended day four at 140 for three in 40 overs. Brendan Taylor wa...
Left-handed openers Shadman Islam smashed his maiden ton in the one-off Harare Test against Zimbabwe on Saturday. Najmul Hossain Shanto also picked up his second Test hundred. Riding on their wonderf...
Bangladesh off-spinner Mehidy Hasan Miraz, fresh off a superb afternoon in Harare as Zimbabwe were bowled out, has said that having a five-wicket haul in an overseas Test will surely increase his conf...
Cricket resumed at the end of last year after a notable number of international cricket series were postponed due to the coronavirus outbreak in March 2020. However, we missed some FTP fixtures due to...